Abaklami Nobunjiniyela Bathi Simelene Nephrojekthi YeSapanca Teleferic - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmaraI-54 SakaryaAbaqambi Nonjiniyela bathi Simelene neSapanca Teleferic Project
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş I-54 Sakarya, JIKELELE, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, TURKEY, TELPHER 0
Abamele amakamelo wonjiniyela nabakhi bezakhiwo eSakarya bahlangana nommeli wenkampani enza iphrojekthi ye-ropeway eSapanca
Iphrojekthi ye-ropeway e-Kırkpınar Neighborhood, eyayisetshenziswa kuMasipala waseSapanca ngesikhathi sokuphatha sangaphambilini, ibiseku-ajenda yomphakathi isikhathi esithile. UBursa Teleferik AŞ, ophumelele ithenda, wahlangatshezwa nokusabela kwabantu bakulesi sifunda nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni ngaphambi kokuqala umsebenzi.
USalimim Aydın, Ummeli weSakarya weSifundazwe seChamber of Mechanical Engineers oxhumene ne-TMMOB (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects), uHüsnü Gürpınar, uMongameli weSakarya Igatsha Lobunjiniyela Bombuso, uSami Kafadar, Ummeli weSakarya wesiFundazwe seChamber of Architives, esikhundleni se-Distriter yeGistriter ye-Dector. the Mandacı; Wayenomhlangano noBurhan Özgümüş waseBursa Teleferik A.Ş.
Ngemuva kwesicelo sale nkampani, uBurhan Özgümüş, oyisikhulu senkampani, uqale wakhuluma emhlanganweni owawubanjelwe kummeli wesifundazwe weChamber of Mechanical Engineers.
U-Özgümüş uchaze imininingwane yenqubo yokuthengwa kwempahla kuze kube manje wathi u-80% wezinkokhelo ezenziwe kuMasipala waseSapanca wenziwa.
Ngaphandle kokubona indawo
U-Özgümüş wathi basayine lo mbiko wokulethwa ngaphandle kokubona leyo ndawo, kodwa abakwazanga ukuqala umsebenzi; Isizathu salokhu ukuthi iMeya entsha kulindeleke ukuthi ithathe isihlalo sikamasipala, kusho yena.
Ummeli weChamber of Mechanical Enjiniya esifundazweni saseSalim, eKartepe naseSapanca Kırkpınar endalini ubuze inani lababambe iqhaza kulolu hlelo.
Iziphathimandla zenkampani, lo mbuzo; Okwamanje, i-2 yisikhathi sezinyanga kanye nefayela lethenda, inani lamafemu i-4, inani labathengisi be-1, ukuthi bona uqobo baphendule ngokusho.
SIKHONZE KULO MQHAFA
I-Chamber of Mechanical Enjiniya Umele isifundazwe salo mhlangano, imininingwane elandelayo ngokuqhubeka komhlangano yanikezwa:
I-Teknik Kwachazwa ngobuchwepheshe ukuthi ukukhetha indawo le phrojekthi akulungile. Uma kuceliwe, kumenyezelwa ukuthi bazonikezwa ukwesekwa okugcwele ezifundweni ezintsha zephrojekthi ngokunquma enye indawo ezosiza abantu kanye nedolobha ngaphandle kokulimaza ibhalansi yemvelo. I-Union of Chambers of Turkish Architects kanye Nonjiniyela Njengezingxenye zeSakarya, baphikisana nesimo samanje seprojekthi. usonkontileka waziswa ngokuzimisela kwabo futhi wababonga ngomhlangano. ”(USakarya Yenihaber)
Abadwebi be-Architects ne-Engineers Group bakhuluma nge-Kadıköy-Kartal subway! 19 / 08 / 2012 Nakuba sakhe umzila wesitimela esidala kunazo zonke emhlabeni, Isitimela se-Rail Systems sezinakekelwe ezweni lethu isikhathi eside kusukela ku-1940 kuya ku-1990 iminyaka. Ukuntuleka kwesitimela okwanele e-Istanbul kanye namadolobha amakhulu athuthukile emhlabeni futhi ukuphazanyiswa kokuhlanganiswa kwezithuthi zomphakathi bekulokhu kuvezwa e-Istanbul, idolobheni elikhulu. Ukuhamba komphakathi kuye kwasheshisa ku-20 yokugcina, ikakhulukazi ngokuthuthukiswa kwemiklamo yamamitha kanye nokukhanya kwamamitha. ukuthuthukiswa kwezinhlelo zesitimela kubhekwe njengabalulekile, kepha lapho sicabanga ngamandla okukhula, kutholakale ukuthi izifundo azanele. Izitimela nezitimela zihamba kahle, ziphephile, zihamba ngokushesha futhi zikhululekile.
Namuhla emlandweni: 11 February 1888 Ukwakhiwa kweSystems Station kwaqala. Umdwebi we-Prussian Ogust Yasmund ... 11 / 02 / 2015 Namuhla emlandweni we-11 Ngenhloso ye-1878 yangoFebruwari, ukwemukelwa kwe-Rumeli esitimela inkampani yokusebenza e-Austrian ubuzwe yamukelwa. Igama lenkampani laliyi-East Railways Business Company. 11 February 1888 Ukwakhiwa kwesiteshi se-Sirkeci saqala. Isakhiwo, esakhiwe ngumdwebi uPrussian Ogust Yasmund, sathunyelwa ku-3 November 1890.
Umdwebi wayefuna iSanan Mosque i-500 isamente esinezinyanga ngonyaka uMarmaray 110 enelisekile ngonyaka 06 / 06 / 2013 UNdunankulu u-Tayyip Erdoğan ubuze u-Ahmet Eren, uSihlalo weCement Industry Employers 'Union kanye neBhodi Yabaqondisi Eren Holding Sihlalo emhlanganweni eBitlis, eminyakeni eyi-500 edlule. indlu engaki iminyaka emingaki? - I-110 inomlando waminyaka yonke. - Ngisho nangaleso sikhathi, izakhiwo ze-2 zesikhathi eside zafakwa. Kungani unamakhasimende angakwazi ukuhamba ngaphezu kwe-500-500 iminyaka? Ahmet Eren, kule ngxoxo phakathi UNdunankulu uthe Turkey Usimende Manufacturers Association (TCMA) UMongameli Izithuthi futhi Oyak Usimende Iqembu emhlanganweni, le TÇMB likamongameli ...
Umdwebo ocebile eMbhodini leMimar Sinan 30 / 04 / 2014 Mimar Sinan Ibhuloho 'Yini Umbala obucayi: Kocaeli Metropolitan Municipality D-100 abezinyawo giant ibhuloho, elakhiwa emgwaqeni omkhulu phambi okusha ngoLwesihlanu Mosque Mimar Sinan Ibhuloho ngesineke. Inqubo yokudayisa kulindeleke ukuthi iqede cishe izinyanga ezingu-6. I-CLEANLENİP, I-PAINTING Elinye lamabhuloho amakhulu ahamba ngezinyawo ezakhiwe nguMasipala waseMetropolitan ku-D-100 Highway, omunye wesakhiwo se-giant Sinan Bridge iSan Bridge Bridge ye-3 ithenda yokudweba yabanjwa cishe ngenyanga edlule. Le nkampani yaqala inqubo yokudweba ibhuloho ekuqaleni kwezinyanga zasehlobo. Ukudweba nge-cranes ekhethekile nabasebenzi be-4 kuhloswe ukuba kugcwaliswe ezinyangeni ze-7. Izikhulu zenkampani zathi uma isimo sezulu sihamba kahle, lesi sikhathi sizoba yi-daha
Uma i-escalator ye-Mimar Sinan Bridge ingahamba 03 / 06 / 2014 Uma ama-escalators eMimar Sinan Bridge angahamba futhi: Umgwaqo omkhulu we-D-100 Kuningi lomgwaqo wesintu kumabhuloho ahamba ngezinyawo ku-Izmit owela. Kodwa-ke, ama-escalators eMimar Sinan Bridge, ikakhulukazi phambi kweYenicuma Mosque, avame ukukhubazeka. Lapho lezo zitebhisi zingahambi, ikakhulukazi asebekhulile, ukuwela ibhuloho labahamba ngezinyawo nakho kuyabuhlungu kakhulu. Ama-escalator kudingeka ahlolwe kaningi uma esebenza, futhi uma kungenzeka, adinga ukungenelela ngokushesha.
Abadwebi be-Architects ne-Engineers Group bakhuluma nge-Kadıköy-Kartal subway!
Namuhla emlandweni: 11 February 1888 Ukwakhiwa kweSystems Station kwaqala. Umdwebi we-Prussian Ogust Yasmund ...
Umdwebi wayefuna iSanan Mosque i-500 isamente esinezinyanga ngonyaka uMarmaray 110 enelisekile ngonyaka
Uma i-escalator ye-Mimar Sinan Bridge ingahamba
I-elevator isebenza kuBhuloho iMimar Sinan Yaya